Fahazavan'i Kristy eto amin'izao tontolo izao - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Fahazavan 'i Kristy eo amin' izao tontolo izao
Ny fifanoheran’ny mazava sy ny haizina dia fanoharana matetika ampiasaina ao amin’ny Baiboly mba hampifanoherana ny tsara sy ny ratsy. Nampiasa fahazavana i Jesosy mba hanehoana ny tenany: “Tonga tamin’izao tontolo izao ny mazava, ary tia ny maizina mihoatra noho ny mazava ny olona, ​​satria ratsy ny nataony. Fa izay manao ratsy dia mankahala ny mazava; tsy miditra ao amin’ny mazava izy mba tsy hisehoany izay ataony. Fa na iza na iza manaraka ny marina amin’izay ataony dia mizotra ho amin’ny mazava, ka dia hita miharihary fa miorina amin’Andriamanitra izay ataony » (Jaona. 3,19-21 Fandikan-teny Genève Vaovao). Ny olona miaina ao anatin’ny haizina dia voataonan’ny fahazavan’i Kristy tsara.
Peter Benenson, mpisolovava anglisy, dia nanangana ny Amnesty International ary nilaza ampahibemaso tamin'ny 1961 fa "tsara kokoa ny mandrehitra labozia noho ny manozona ny maizina". Noho izany, ny labozia iray nohodinin'ireo tariby nihidy dia nanjary mariky ny fiarahamoniny.
Hoy ny apostoly Paoly: “Tsy ho ela dia ho tapitra ny alina, ary ho tonga ny andro. Koa aoka isika hisaraka amin’ny asan’ny maizina, fa ho fiadiany ny fiadian’ny mazava. » (Romana 1.3,12 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Mieritreritra aho fa indraindray manamaivana ny fahafahantsika mitaona an'izao tontolo izao ho tsara kokoa. Matetika isika manadino ny fomba ahafahan'ny fahazavan'i Kristy manova bebe kokoa.
«Ianareo no fahazavana manazava izao tontolo izao. Tsy azo afenina ny tanàna avo eny an-tendrombohitra. Tsy mandrehitra jiro ianao dia manarona azy avy eo. Ny mifanohitra amin’izany aza: apetraka izy io mba hampazava ny olona rehetra ao an-trano. Aoka hazava eo imason'ny olona rehetra toy izany koa ny fahazavanareo. Amin’ny asanareo no hahafantarany ny Rainareo Izay any an-danitra ka hanomezam-boninahitra Azy koa » (Mat 5,14-16 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Na dia manarona antsika aza ny haizina indraindray, dia tsy mahafaly an'Andriamanitra mihitsy izany. Tsy tokony havelantsika hatahotra intsony ny ratsy eto amin'izao tontolo izao satria mahatonga antsika tsy hijery hoe iza i Jesosy, inona no nataony ho antsika, ary izay omena antsika.
Lafin-javatra mahaliana iray momba ny toetran'ny mazava ny antony tsy ananan'ny fahefana maizina amin'izany. Na dia mamafa ny haizina aza ny hazavana dia tsy marina ny mifamadika. Ao amin'ny Soratra Masina, io fisehoan-javatra io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny toetran'Andriamanitra (mazava) sy ny ratsy (maizina).
“Izao no teny renay taminy ka torinay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy haizina ao aminy. Raha milaza isika fa manana firaisana aminy, nefa mandeha ao amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran’i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin’ny ota rehetra.”1. Johannes 1,5- iray).
Na dia toy ny labozia kely iray afovoany ao afovoan'ny fiposahan'ny alokaloka aza ianao, na ny labozia kely iray aza dia mbola manome fahazavana ary manome aina. Amin'ny fomba toa kely dia toa taratra an'i Jesosy izay fahazavan'izao tontolo izao ianao. Io no jiron'ny cosmos manontolo, tsy ho izao tontolo izao sy ny fiangonana ihany. Esory ny fahotan'izao tontolo izao, tsy avy amin'ny mpino ihany fa amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Amin'ny herin'ny Fanahy Masina, amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy no nitondranao anao nivoaka avy tao amin'ny maizina ho ao amin'ny fahazavan'ilay fiainana manome fiainana miaraka amin'ilay Andriamanitra Telo, izay nampanantena fa tsy handao anao mihitsy. Izany no vaovao tsara momba ny olona rehetra eto amin'ity tany ity. Tian'i Jesosy ny olona rehetra ary maty ho azy rehetra izy, na fantany izany na tsia.
Rehefa mitombo ao anatin'ny fifandraisantsika akaiky kokoa amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy isika dia mihamamiratra hatrany amin'ny hazavana omen'Andriamanitra. Mihatra amintsika tsirairay avy amin'ny tsirairay ary koa amin'ireo fiaraha-monina.
« Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. sady tsy an'ny alina na an'ny maizina isika »(1. Tes 5,5). Amin’ny maha-zanaky ny mazava antsika, dia vonona ny ho mpitondra fahazavana isika. Amin’ny fanolorana ny fitiavan’Andriamanitra amin’ny fomba rehetra azo atao dia hanomboka hanjavona ny haizina ary ho tonga taratry ny fahazavan’i Kristy bebe kokoa ianao.
Ilay Andriamanitra telo izay iray, ilay fahazavana mandrakizay, no loharanon’ny “fahazavana” rehetra, na ara-batana na ara-panahy. Ny Ray izay namorona ny mazava dia naniraka ny Zanany ho fahazavan’izao tontolo izao. Ny Ray sy ny Zanaka dia naniraka ny Fanahy hitondra fahazavana ho an’ny olona rehetra. Andriamanitra dia miaina ao anatin’ny fahazavana tsy azo idirana: «Izy irery ihany no tsy mety maty, mitoetra ao amin’ny fahazavana tsy hain’olon-kafa, tsy mbola nisy nahita Azy. ho Azy irery ihany ny voninahitra sy ny hery mandrakizay” (1. Tim. 6,16 Fanantenana ho an'ny rehetra).
Andriamanitra dia manambara ny tenany amin’ny alalan’ny fanahiny, eo anatrehan’i Jesosy Kristy Zanany tonga nofo: «Fa Andriamanitra, Izay nilaza hoe: Avy amin’ny maizina no mahazava ny mazava, no nanome ny fontsika famirapiratan’ny mazava, mba hiposahan’ny fahazavana ho amin’ny fahalalana ny voninahitra. an’Andriamanitra eo amin’ny tavan’i Jesosy Kristy »(2. Korintiana 4,6).
Eny fa na dia tsy maintsy miahiahy aza ianao amin'ny voalohany mahita io fahazavana be loatra io (Jesoa), raha mijery azy bebe kokoa dia afaka mahita hoe manenjika lavitra ny maizina.